Fifampitifirana teny Antanimora : Basin’ny Gal Ramananarivo no nentin’ireo jiolahy – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2013 → novembre → 26 → Fifampitifirana teny Antanimora : Basin’ny Gal Ramananarivo no nentin’ireo jiolahy
Fifampitifirana teny Antanimora : Basin’ny Gal Ramananarivo no nentin’ireo jiolahy
Redaction Midi Madagasikara 26 novembre 2013 Antanimora, basy, Fifampitifirana, Gal Ramananarivo
Olona sendra nandalo voatifitra teo amin’ny masony!
Mbola mitohy ny fikarohana ireo jiolahy tafatsoaka.
“Rehefa natao ny fanamarinana rehetra dia fantatra fa anisan’ireo basy very tao amin’ny tranon’ny Jeneraly Ramananarivo teny Andohan’i Mandroseza ny nentin’ireo jiolahy saika hanao fakana an-keriny ary nifampitifitra tamin’ny mpitandro filaminana teny Antanimora tamin’ny sabotsy teo iny”, raha ny nambaran’ny tomponandraikitra ambony avy ao amin’ny zandarimariam-pirenena omaly. Tamin’ny alalan’ny laharan’ilay basy no nahafantarana izany. Raha tsiahivina moa dia nandritra ny fisavana ilay fiara Peugeot 405 nentin’ireo jiolahy no nahitana ity basy ity. Efa saika hampiasain’ireo olon-dratsy ilay basy fa raha iny hiondrika haka azy iny indrindra ilay nitondra ny fiara no voatifitra avy hatrany. Ankoatra ity kalachnikov ity moa dia mbola nahitana basy Revolver sy bala telo ihany koa teny amin’ireo jiolahy.
Raha izao fandehan’ny raharaha izao dia misokatra ho any amin’ny fanadihadiana iray hafa indray ny mpitandro filaminana, satria ankoatra ilay fikasana haka an-keriny teratany karana dia miverina misokatra indray ny fanadihadiana mahakasina ny famonoana ity manamboninahitra ambony avy ao amin’ny zandarimaria ity.
Raha tsiahivina dia tamin’ny asabotsy teo, tokony ho tamin’ny 7 ora hariva, no saika haka an-keriny teratany karàna iray ireto jiolahy ireto, izay misy ny mitaingina moto, ary misy ny mandeha fiara. Nitondra vola tamin’ny baoritra io karàna io ary narahan’izy ireo tetsy Tsaralalàna, teo amin’ny Hotel Anjary sy Cocentral. Nisy zandary nanao fanamiana sivily nanaraka ny fihetsik’ireo jiolahy, saingy tsikaritr’ireo olon-dratsy ka nobahanany tamin’ny moto. Fotoana fohy taorian’izay dia fantatra fa hanao fivoriana vonjimaika tao amina trano iray tetsy Ambohitrakely ireo jiolahy ka nidina teny ny zandary. Vao nahita ireo mpitandro filaminana ireto mpaka an-keriny ireto dia nitifitra avy hatrany. Raikitra teo amin’izay ny fifampitifirana, teo ambanin’ny La Gastro Pizza. Jiolahy telo no maty tamin’izany. Ny iray teo ambonin’ilay moto bol d’or, ny iray ilay nitondra Peugeot 405,izay nentin’izy ireo, ary ny iray kosa tety ivelany. Ny sasany tamin’ireo jiolahy kosa tafatsoaka, tamina fiara P.405 iray hafa.
Nampahafantarin’ny tomponandraikitra ihany koa fa efa basy mahery vaika 125 izay no efa tratran’izy ireo tany amina jiolahy nandritra ity taona ity, ary mbola mitohy hatrany ny ezaka atao hoentina hamongorana ny asan-jiolahy eto amintsika.